DAAWO:Ninkii Qaaday Weerarkii Mididda Ahaa ee Bariga London oo Somali Noqday iyo Walaalkii oo La Waraysay |
DAAWO:Ninkii Qaaday Weerarkii Mididda Ahaa ee Bariga London oo Somali Noqday iyo Walaalkii oo La Waraysay
Nin Soomaali ah oo magaciisa la yidhaa Muxuyadiin Mire oo habeenkii Sabtida midi ku weeraray dad ku sugnaa goob laga raaco tareenada dhulka hose mara oo ku yaal xaalfada dhanka bari ee London ee Leytonstone ayaa maanta la keenay maxkamad ku taal West Minister oo ah badhtanka London.
Ninkan oo dhaawac culus u geystay nin dadkiisa lagu sheegay 56 jir cadaan ah ayaa walaalkii iyo xubno kale oo ka mid ah ururada Soomaalida ee dhalin yarada u shaqeeya ay soo bandhigeen xaaladiisa caafimaad. Mar ay u waramayeen caawa telefishanka Channel 4 ee UK waxa ay sheegeen in aanu caafimaad ahaan dhamayn, isla markaana uu ahaa mid qaadan jiray mukhaadaraadka loo xashiishada cagaaran iyo qaadka.
Maxamed Mire oo wiilka midada wax ku weeraray ay walaalo yihiin ayaa waxa uu yidhi “Waxa aan qorshaynayey in aan Soomaaliya u diro Axadan” Sidaa wax uu u sheegay John Snow oo ah wariyaha ay ugu waramayeen stuudyowga Ch4.
Mar la weydiiyey xaalada caafimaad ee wiilka weerarka mida u adeegsaday walaalkii Maxamed Mire, waxa uu sheegay in uu xanuunsanayey mudo isla markaana uu galay dhakhtarka dadka dhinbirka, laguna daweeyey inkastoo uuna saani u bogsan. Waxa kale oo uu Maxamed Mire sheegay in walaalkii dalka yimid isagoo 12 jir ah imikana yahay 29 jir markii hore noloshiisa isku dayey in uu dib u dhiso mar uu yara ladnaaday, isla markaana ku shaqeeyey xirkada Taxi-ga ama wadista gaadiidka la kirayso. “Waxa uu u shaqeeyey UBER -ka oo mar wuu ladnaa” Sidaa waxa yidhi Maxamed Mire oo bulshada Britain u soo bandhigay shaqsiyada uu yahay Muxiyadiin Mire oo argagax galiyey dadka dalka UK ficilkii uu kula kacay ee midi-wax ku weerarka ahaa.
Wariye John Snow oo wareysi ga la yeeshay Maxamed Mire ayaa gabo gabadii sheegay in uu la xidhiidhay booliska iyo shirka UBER si uu u xaqijiyo arimaha uu sheegay Maxamed Mire, waxaani yidhi “Waxa boolisku sheegay in mudo 3 todobaad ka hor lagu soo wargaliyey in Muxuyadiin Mire yahay nin dadka halis galinaya oo xanuusanaya, waxayna sheegeen in hay’adaha qaabilsan adeega bulshada, sida kuwa dhinbirka loo gudbiyey. Waxanu John Snow sheegay in shirkada UBER sheegtay in ay ee hubinayso macluumaadka Muxuyadiin Mire kuna soo warcelin doono.
Guud ahaaba saxaafada Britain oo si weyn uga warantay dhacdadii Sabtidii ee midi-waxa ku weerarkii Muxuyadiin Mire ayaan soo hadal qaadin xaaladiisa caafimaad iyo in uu asal ahaan yahay Soomaali. Ilaa maanta ayey soo baxeen wararka dheeraadka ah ee ku saabsan ninkan Soomaaliga ah, waxaana suurto gal ah in ficilka uu ku kacay ay bulshada Soomaalida u keento falccelin iyadoo markii horeba ay jireen Islaam iyo Muslim nacaybka oo xoog u kordhay dalkan UK iyo guud ahaanba Yurub.
Police handcuffs Muhiyadin Mire after used taser to subdue
Muxuyadiin oo boolisku garabo duub u xadhay wareerkii kadib
Hase ahaatee dacwada iyo madaxkamadaynta Muxuyidiin Mire waxa ay sii socondoonto, iyadoo xaakimkii maanta (Isniintii) waxa uu sii gubiyey maxkadama Old Bailey iyadoo kiiskiisa aan lagu darin in uu geystay ficil argagixiso ah, balse lama oga in maxkamadan dambe la keeni doono.
Deg Deg Daawo Maamulka Puntland oo Ka Warbixiyay weerarkii Xalay…
Deg Deg Fashilka Shirkii Mucaaradka iyo Xukuumada Somalia …
War Deg-Dega-Weerar Lagu Qaaday Xabsiga Magaaada Bosaaso, Rasaas Xoogan oo…
Wasaaradda Waxabarashada Somaliland ayaa qoraal ka soo saartay xaaladda Dugsiga…
Garyaqaan Guuleed Daafac Oo ku Dhawaaqay In Uu Iska Joojiyey…
DAAWO X.UCID oo Burco Ku Qaabiley Laba Murashax oo u…
Halkan Ka Daawo G. X.Wadani oo Ka Qayb Galay Shaacinta…
Xoghayaha Guud Gudida Heer Qaran ee Ka Hortaga Xanuunka…